UMEGHAN MARKLE WAYENGENASILINGO SEMAKEUP NGAPHAMBI KOSUKU LOMTSHATO WAKHE KUNYE NEENKCUKACHA EZINGAKUMBI ZOBUHLE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UMeghan Markle wayengenasilingo seMakeup ngaphambi koMtshato wakhe kunye neenkcukacha ezithe kratya ngobuhle bakhe bomtshato
IWINDSOR, ENGLAND-MEYI-19: (BAQAPHELA ABAHLELI: Ukuthunyelwa kwakhona kwe- # 960087582 ngesinye isityalo.) INkosana uHarry, iDuke yaseSussex kunye neMeghan, iiDuchess zaseSussex zisuka eAscot Landau Inqwelomoya ngexesha lokuhamba kwabo kwiCastle Hill ngaphandle kweWindsor castle eWindsor Nge-19 kaMeyi 2018, emva komtshato wabo. (Ifoto ngu-Aaron Chown-I-WPA Pool / imifanekiso ka-Getty)
Ngu: Joyce Chen 02/28/2019 ngo-4: 45 PM
UMeghan Markle Wothusa umhlaba ngokubonakala kwakhe engekabikho-kodwa-ngokusemgangathweni ngomhla wakhe womtshato ngoMeyi ophelileyo, kodwa imfihlelo ngasemva kweempawu zakhe zendalo zezobunyani kukuba, ibiyinto enye kwaye yenziwe.
I-Duchess yaseSussex umculi wexesha elide, uDaniel Martin, uxelelwe IHarper's Bazaar kudliwanondlebe lwakutsha nje ngenxa yeeshedyuli zabo ezixakekileyo, yena noMarko khange bakwazi ukudibana kulingo lwesiko lokuzilungisa ngaphambi kosuku lwakhe olukhulu, ke kuye kwafuneka baxhomekeke kubuhlobo babo obalishumi leminyaka endaweni yoko.
Ndaye eNew York kwaye wayeseLondon kwaye kwakungekho xesha ngenxa yeshedyuli yam yokuphamba ukuze ndikwazi ukuya khona, utshilo. Bendimazi kakuhle ukuba ufuna ntoni kwaye imini yomtshato besimane sihlangana sisenza imake up yakhe njengesiqhelo. Ndiyazi ukuba ufuna nje ukukhazimla, akhazimle, kwaye akhazimliswe kungekho nto ayenzileyo.
Eyona ndlela yokucoceka amakhonkco
IWINDSOR, UBUKUMKANI OBUMANYENEYO-MEYI 19: UMeghan Markle umi esibingelelweni ngexesha lomtshato wakhe eSt George's Chapel eWindsor castle nge-19 kaMeyi 2018 eWindsor, eNgilane. (Ifoto nguJonathan Brady-WPA Pool / Getty Izithombe)
Esi sibini besithumele imiyalezo ebhaliweyo ezimbalwa ngaphambi nasemva kuka-Meyi 19, utshilo. Kwakukho ubume obuninzi kwilokhwe endikholelwa ukuba wayenazo ezinye izinto zokuthambisa, ngekhe ujonge nelokhwe, kwaye yayingeyonjongo leyo, wongeze watsho. Ndiziva ngathi wonke umtshakazi, umzuzu wabo obomvu wekhaphethi ngumtshato wabo kwaye oku bekungaphezulu ngaye kunomboniso, nangona umtshato wawungumboniso.
Xa wayecinga ngomtshato ka-Markle womhla wokutshata, uMartin kwafuneka aqwalasele yonke into, ngakumbi iimeko ezahlukeneyo zokukhanyisa yena kunye neNkosana uHarry ababeza kuba phantsi kwazo imini yonke.
Ukuba ujonga imifanekiso ngokulandelelana kwakhe ekhwele emotweni kunye nomama wakhe, esiya ecaweni, ukuya ngaphandle kwangaphambili, izithambiso zakhe zibukeka zahluke ngokupheleleyo ngenxa yeemeko ezahlukeneyo zokukhanyisa, into ekufuneka ndiyicingile, utshilo uMartin . Kwafuneka ndicinge ngemifanekiso echanekileyo kwaye iboniswa kumabonwakude. Ufika kwinqanaba apho kuya kufuneka wenze i-makeup ehambelana nezo meko zokukhanyisa ngaphandle kokuyekisa enye okanye enye. Ukuba ndiqale ukusinda kwaye wangena ecaweni, ukwakheka kwakhe bekuya kujongeka kumnyama kakhulu kunokuba umbona ekukhanyeni kwendalo. Kwakunjalo nasemini, xa ukukhanya kuphezulu.
Ukujongwa kwesibini kweDuchess, ilokhwe ecekeceke kaStella McCartney ebonisa amagxa akhe anethoni kunye nomzimba omnyama, uMartin waya esiba nzima kancinci kumzimba wokuzenzela ukuze atshintshe inkangeleko yakhe ukusuka emini kuye ngokuhlwa.
IWINDSOR, UBUKUMKANI OBUMANYENEYO-MEYI 19: IiDuchess zaseSussex kunye neNkosana uHarry, uDuke waseSussex bayishiya iWindsor castle emva komtshato wabo ukuya kwitheko langokuhlwa eFrogmore House, ebibanjelwe yiNkosana yaseWales ngoMeyi 19, 2018 eWindsor, eNgilani. (Ifoto ngu-Steve Parsons-I-WPA Pool / imifanekiso ka-Getty)
Ingoma yothando yesikolo esidala
Ndiyithathile mnyama ngakumbi kuba bekungokuhlwa kwaye ndenza inkcazo ngakumbi ngamehlo, ndibenza mnyama ngakumbi kwaye betshaya, utshilo.
Ukongeza ku-Markle, uMartin usebenze kunye nee-A-listers ezininzi kwikhaphethi ebomvu nangaphaya, kubandakanya uJessica Alba, uGemma Chan, kunye no-Olivia Palermo.
Umtshakazi unikwe kude emtshatweni wakhe yindoda efumene intliziyo katata wakhe
Ikhonkco yePhuli yeCantilever (iEdge kunye neCoping Design Isikhokelo)
U-Julia Roberts wayiphosa nje emva koko 'UkuQaphela iNtaba' iMeko yoMtshato
'Utshatile ekuboneni kokuqala' Ixesha lesi-3, Isiqendu 8 Ukuphindaphinda: U-Ashley uxelela uDavid ukuba akanguye uHlobo lwakhe
Iingcamango zeBlue Bedroom ezingama-55 (Imifanekiso)
Iiceramic Floor Pros kunye ne-Cons
18 Ibhokisi yamakhadi oMtshato weKhadi oLungele ukuLwamkela kwakho
Eyona Makeup yoMtshato ilungileyo kuyo yonke imibala yamehlo
Ezi zi-20 zoMtshato woMtshato oLwandle ziQinisekisiwe ukuPhakamisa iindwendwe
‘Amashumi amahlanu amathunzi’ uMdali uE. UJames utyhila ingcebiso yoMtshato noMtshato
U-Adrienne Bailon kunye no-Fiance u-Israel Houghton Yiya Kwikhekhe Lomtshato
UCarrie Ann Inaba ucela uMama wakhe ukuba abe nguMatron weNtloko yakhe: Jonga uMzuzu omnandi
UTim McGraw Marvels e-Faith Hill's Tones Legs kwiPosti: Umtshakazi wam!
Amakhaya esitayile se tuscany
Iindleko zomtshato eziphakathi ngurhulumente
Indawo yokukhanya yelantern yemibono yomtshato
ezona zipho zimangalisayo kuye
ungaxelela njani ukuba unayo idayimane yokwenyani
'Usuku Lwe-90' Baphi Ngoku? Ukuphindaphinda: Ividiyo eNtsha yoMculo, Amarhe okukhohlisa
Iingcamango ezingama-20 zeDessert yomlomo wamanzi ukuze usebenze kunye nekhekhe lakho
U-Khloe Kardashian uthetha ngokuBakho koMtshato kuTristan Thompson